Guyyaa gatii waggaa, ji'aa ykn guyyaa ibsame deebisa.
Waggaa ji'a tartee guyyaa irraa deebisi kan faankishinii dateSerial fi DateValue irraa maddu.
Lakkoofsa guyyaa torbanii waliin wal gitu kan lakkoofsa guyyaa kamiitiin ibsamu deebisa innis dateSerial ykn DateValue faankishiniin ibsama.
Waggaa eenyummaa guyyaa irraa deebisi kan faankishinii DateSerial or the DateValue irraa madde.
Irra dedeebi'ii guyyota kennaman intervaalii guyyotatti ida'i isaan booda guyyaa argatte deebisi.
Lakkoofsa guyyaa intervaalii guyyaa lamaan kennaman gidduu jiru deebisi.
Faankishinin DatePart guyyaa caqasame deebisa.
Title is: Gatiiwwan guyyaa jijjiiruu